Apple Kutengesa kutengesa kunokwira kota yekupedzisira | Ndinobva mac
Apple Kutengesa kutengesa kunokwira mukota yekupedzisira
Kubva iyo Apple Watch yakarova pamusika muna 2015, chave chiratidzo chekutevera, kunyangwe usave wekutanga kurova pamusika, rukudzo rwunowira pasi pePebble isingachashandi, kambani yakundikana kuenderana nemusika wemavara uye ikaguma yatengwa neFitbit, kambani yakawanikwa neGoogle gore rapfuura.
Kubva 2015, Apple yakaparura Apple Watch nyowani pamusika uye parizvino tiri muzvikamu zvitanhatu, imwe yemawadhi akanakisa pamusika, zvirinani kune iOS, kubvira iyo Samsung Galaxy Watch 6, inotipa iwo mamwe mabasa eoksijeni muropa uye ECG yeiyo ecosystem.
Kana tikataura nezvekutengesa kweApple Watch, isu tinofanirwa kutaura, zvinosuwisa, zvekufungidzira, sezvo Apple isina kubvira yazivisa zviri pamutemo kutengesa uko mudziyo uyu waive nako. Zvinoenderana nekambani yeIDC (kuburikidza MacRumors), Mukota yekupedzisira, inoenderana kubva muna Chikunguru kusvika Nyamavhuvhu, Apple yakatumira mamirioni 11.8 Apple Watch, izvo zvinomiririra kuwedzera kwe75% zvichienzaniswa nenguva yakafanana yegore rapfuura, uko kutumirwa kwaive pamamiriyoni 6.8.
Chikamu chakakura chekuwedzera mukutengesa chinowanikwa mu Apple Watch Series 3 kuderedzwa kwemutengo, modhi yakava yekupinda mudziyo kune ino renji kweanopfuura mazana maviri maeuro.
Aya mamirioni 11.8 mayunitsi anofungidzira rQuarterly yekutengesa rekodhi yeApple Watch, nekuti sekureva kweStatista firm, Apple yakanga isati yambopfuura mamirioni 0 mamamodeli anotumirwa mune chero imwe kota
Apple Watch musika mugove maererano neIDC ndeye 21.6% Pasi rese, chinzvimbo chechipiri mushure meXiaomi, ane mugove wemusika unomira pa24,5%, chishandiso chakatengwa zvakanyanya kuve iyo Mi Band 5, chishongo chekuyera chinodhura anodarika makumi matatu euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple Kutengesa kutengesa kunokwira mukota yekupedzisira
Actress Julianna Margulies Anobatana neMangwanani Ratidza Mwaka XNUMX Cast
Mexico yakagadzirira kuuya kweApple Pay